Matonho 100 Emunamato wevakadzi | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 100 Matipi Emunamato kune Vakadzi
Zvirevo 31:30 Nyasha zvinonyengedzera, uye runako hahuna maturo; asi mukadzi anotya Jehovha, ndiye anofanira kurumbidzwa.
Nhasi tichave tichitarisa zana eminamato yemadzimai. Iyi minamato yeminamato inozopa vakadzi simba pasirese kuti vakwanise kunyatsozvinamatira pachavo uye kune vadiwa. Mukadzi anotya Mwari anofanira kunge ari mukadzi anonamatira. Chero mukadzi chero anoda kuona Ruoko rune simba rwaMwari muhupenyu hwake anofanira kunge ari mukadzi munamato. Mazhinji evakadzi vanoita jende kuburikidza neimwe nzira yenhamo kana imwe. zvinongotora minamato yakatarwa kukurira dhiabhori. Ino zana yemunamato inonongedzera vakadzi, inofukidza nzvimbo dzakawanda, apo vakadzi vedu vanoda minamato. Sezvo iwe uchiita minamato iyi nhasi, imba yako ichave yakaviriswa muzita raJesu
Mazhinji madzimai epasi rese nhasi vari goint kuburikidza nematambudziko anotyisa muhupenyu hwavo, vamwe vari kunetsekana muroorano, vamwe mune imomo bhizinesi, vamwe mune hutano hwavo .. Vakadzi vatakuri vemitoro, vanokwanisa kutakura mitoro yevak kukanganisa kwevanhu. Vakadzi vedu vanoda minamato ikozvino kupfuura kare. Munamato uyu unonongedzera vanhukadzi unopa simba vakadzi vedu kuti vasimuke vanamate. Semukadzi, i dont care iro dambudziko rauri kutarisana naro, iwe unofanirwa kusimuka uye unamate nzira yako kuti ubudirire, unofanira kutaura naDhiabhori muhupenyu hwako uye uti zvakwana zvakwana. Usatendera dhiabhori kutora kubva kwauri izvo zvaakapihwa newe. Iwe unofanirwa kuve mukadzi akagona kuita sekupokana naDhiyabhurosi paatari yemunamato. Simuka unamate pane rako muchato, yako mariro emuchato, dzako murume, yako vana, nebasa rako / bhizinesi. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yeminamato, ini ndinokuona iwe uchichinja nhanho muzita raJesu.
Pazasi pane Powerful minamato mapoinzi evakadzi:
Minamato Yekunoroora Kwemuchato
1. "Iwe unotambudza Israeri wangu, Mwari wangu achakutambudza nhasi muzita raJesu."
2. Iwe mvura yekuropafadza, wira pamusoro pewanano yangu yekuroora muzita raJesu.
3. Magnets of favour, kunaya pane wangu wekuroora, muzita raJesu.
4. Wese maPower ekushora kwemweya kushanda pasi pehupenyu hwangu kufa, muzita raJesu.
5. O Ishe, runako rwamwari ngarugadzike pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
6. Mapatya akaipa anatsiva mumweya, akafa, muzita raJesu.
7. Vabereki vane mweya yakaipa, vofa, muzita raJesu.
8. O Mwari, itai hupenyu hwangu kushamisika kuvavengi vangu, muzita raJesu.
9. Jongwe risati rarira, rega zuva revakaroora risvike pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
10. O Mwari, ndipeiwo Mwari wangu akarongerwa mukadzi nemuzita raJesu.
11. Chero huroyi hwen'anga dzemhuri, dzichirwisa imba yangu, ngadziparadzwe izvozvi muzita raJesu.
12. Vabati vaSatani, enda kure nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
13.OO Lord, Wangu wandinopihwa wangu mudiwa aonekwe parizvino moto, muzita raJesu.
14. Miseve yekusurukirwa nekusingaperi, buda muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
15. O Ishe, ini ndinoramba zvese zvakaipa nekuchinja kwakashata muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
16.Mweya Wakachena, simuka ugadzirise zvakare hupenyu hwangu hwezvakanaka, muzita raJesu.
17. Zvese zveSatani zvomweya zvemuchato uye mhete, ngazvive kuparadzwa izvozvi !!! muzita raJesu.
18. Iwe simba remuchato wakashata, kufa, muzita raJesu.
19. Shamwari dzese dzisina kutendeuka dzerima mumhuri yangu, dzive pachena uye nyadziswe, muzita raJesu.
20. O Mwari, simuka unyure pasi zvese zvaFarao chitadzo Gungwa Dzvuku, muzita raJesu.
Minamato yewanano yangu
1. Baba ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti muchapindira muwanano yangu kuburikidza nemunamato aya muzita raJesu.
2. Ini ndinoparadza chero chinhu chinomira pakati pangu neminamato yangu ikozvino, muzita raJesu.
3. Nyasha dzekunamatira kusvika padanho rekubudirira muwanano yangu, wira pandiri ikozvino, muzita raJesu.
4. Tenzi Jesu, ndinokukoka Iwe kuti uuye kuzondibatsira mune ese akaoma mamiriro ezvinhu muwanano yangu.
5. Zvese matrimonial zvangu, zvakagadziriswa pamukadzi asingazivikanwe, ndinozvibvisa, muzita raJesu.
6. Ini ndinobvisa rugare, kuwirirana, kubatana, rudo uye kuenderera mberi pakati pemurume wangu nemukadzi asingazivikanwe, muzita raJesu.
7. Ishe Jesu, regai chinoshamisa uye chisakachena rudo kudanana pakati pemurume wangu uye chero mukadzi anoshamisa ngaagume izvozvi !!! Muzita raJesu.
8. Ini ndinobvisa kufarirwa nemurume wangu kubva pamukadzi asingazivikanwe muzita raJesu.
9. Ini ndinomira kupesana nesimba rese re barika, muzita raJesu.
10.Wese miseve yakaipa yemweya yakabvutwa kubva kune mukadzi asingazivikanwe parizvino muwanano yangu, sunungura grip yako pamuchato wangu uye dzokera kune watumira iwe, muzita raJesu.
12.Kuita irreparable kupatsanurana kuve pakati pemurume wangu uye mukadzi uyu anoshamisa / murume muzita raJesu.
13.Angel raMwari, enda ipapo uye unogadzirisa hukama pakati pemurume wangu nemukadzi asingazivikanwe muzita raJesu.
14.Mukadzi wese asinganzwisisike anopesana nemuchato wangu, gashira kutongwa kwaMwari, muzita raJesu.
18.Moto uye moto waMwari, tanga kupararira kuita zvidimbu, hukama hwakasimba hwese hwe mukadzi akashamisika mumoyo wemurume wangu, muzita raJesu.
19.Iwe madhimoni unopa hukama pakati pemurume wangu uye chero mukadzi asinga zive, ngaapiwe asina simba uye agovaniswa nemoto waMwari, muzita raJesu.
Minamato Yemurume Wangu
4). Ini ndinotenderedza murume wangu nemoto muzita raJesu
5). Wese anotsvaga hupenyu hwemurume wangu achaparadzwa muzita raJesu
6). Ini ndinodaira nhasi kuti hapana chombo chakagadzirirwa murume wangu chinobudirira muzita raJesu.
7). Wese akashata akaipa kubva kumakungwa nyika izama kunyengerera murume wangu, ini ndinoburitsa moto waMwari pauri izvozvi muzita raJesu.
8). Ini ndinoparadzira nemoto chero rakaipa boka kumukira murume wangu nezita raJesu.
9). Ini Dec! Hupofu hwakakwana pane mweya yega yega yekutarisa, kuongorora kufambira mberi kwemurume wangu muzita raJesu
10). Muvengi wese wemurume wangu budiriro ichave yekunyadziswa zvachose muzita raJesu
11). Baba mununure murume wangu kubva paupombwe muzita raJesu.
12). Baba mununure murume wangu kubva kuhumiro muzita raJesu
13). Baba mununure murume wangu kubva kumweya wekunyorwa muzita raJesu.
14). Baba ndinunure murume wangu kubva kumafirimu evanhu vakuru muzita raJesu
15). Baba dzosa rudo mumhuri yangu muzita raJesu.
16). Kusunga murume wangu uye kumusunungura zvachose muzita raJesu
17). Baba chengetedza murume wangu kubva kuzvirwere zvinotapuriranwa pabonde nemuzita raJesu.
18). Ini ndinoraira zviitwa zve wasters kupera muhupenyu hwemurume wangu muzita raJesu.
19). Baba zadza moyo wemurume wangu nerudo rwako muzita raJesu.
20). Ndatenda Jesu nekupindura minamato yangu
1. Tenda Mwari nekuda kwesimba Rake rakakura rekuponesa kusvika kumagumo, nekuda kwesimba Rake rekununura kubva kune chero chimiro cheuranda.
2. Reurura zvivi zvako uye izvo zvemadzitateguru ako, kunyanya zvivi izvozvo zvine hukama namasimba akaipa uye nokunamata zvifananidzo.
4. Ishe, tumai chemberi yemoto kunheyo yehupenyu hwangu uye paradzai zvakashata zvese zvirimo.
5. Ropa raJesu ngaribude muhurongwa hwangu zvese zvakagarwa nhaka satanic, muzita raJesu.
6. Ndinozvisunungura kubva mukubatwa kwedambudziko ripi neripi rakaendeswa muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
7. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva patsika dzakaipa dzese dzakagarwa nhaka, muzita raJesu.
8. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kunhaka dzose dzakagarwa nhaka, muzita raJesu.
9. Ini ndinoraira kuti vese vane simba rekutanga vanamatira hupenyu hwangu kuti vafe mitezo, muzita raJesu.
10. Ndinodzima mhedzisiro yezita ripi neripi rakaipa remunharaunda rakanamatira munhu wangu, muzita kana Jesu.
11. Ini ndinotyora ndobva ndazvisunungura kubva kumhando dzose dzekunyengedzwa nemweya yakaipa, nezita raJesu.
12. Rega ropa raJesu riwedzerwe mumudziyo wangu weropa.
13. Tenzi Jesu, famba udzokere mukati mega yega yehupenyu hwangu; ndisunungure pandinoda kununurwa, ndiporese pandinoda kurapwa uye mundishandure pandinoda shanduko.
14. Rega ropa raJesu ribvise chero chinyorwa chisina kujeka kubva muzvinhu zvese zvehupenyu hwangu.
15. O Ishe, gadziridzai mweya wakanaka mukati mangu.
16. Aiwa, Ishe, dzidzisai kudana kwangu nemoto Wako.
17. O Ishe, ndisikei ndiri mutsvene kwandiri.
18. O Ishe, regai kuzodza kuti kupfuure muhupenyu hwangu hwomweya uye hwepanyama kuwire pamusoro pangu.
19. O Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu.
20.Mweya Wakachena moto, undisevenza pakubwinya kwaMwari.
Minamato yeVana Vangu
Previous nyaya3 Mazuva Ekutsanya Uye Minyengetero Yekununurwa Kwemhuri
inoteveraPfungwa makumi matatu Eminamato Yekutenda Ino Fambisa Makomo
Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Pamhepo dzenzvimbo
30 Minamato Yekunamatira YePfungwa dzeBhizinesi